Ciidmada Dawlada iyo kuwa Mareeknaka Ayaa faarujiyey deegaanka Baar Sanguuni(Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya deegaanka Baar Sanguuni ee Gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in ciidamadii dowladda, kuwa Jubbaland iyo askartii mareykanka ay isaga baxeen deegaankaas, kaddib weeraro saacadihii la soo dhaafay ay wajahayeen.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in ciidamada oo wata gaadiidkooda dagaalka ay dhanka wadada laamiga ee Kismaayo aada ay u baxeen.
Ciidamada ayaa waxaa wehlinayay gawaarida gaashaaman, sidoo kale waxaa la arkayay diyaarado Helicoptero ah oo kor ka ilaalinayay.
Arrintan ayaa ka dambeysay, kaddib markii maalin ka hor weerar ka dhacay deegaankaas lagu dillay askari Mareykan ah, halka afar kale lagu dhaawacay.
Sidoo kale maalintii shalay ayaa waxaa agagaarka saldhigga ay degenaayeen Ciidamada ka dhacay weerar is qarxin ahaa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo ay wehliyaan Ciidamo Mareykan ah iyo kuwa Kenyan ah ayaa maalmihii la soo dhaafay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka waday deegaanada waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo, halkaasoo ay aad ugu xooggan yihiin Al-Shabaab.
C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inay soo gaba gabeeyeen wajigii labaad oo ah shuruudaha Soomaaliya looga cafinayo deymaha